Unai Emery Oo Go’aan Ka Gaaray Hadii Granit Xhaka Uu Kusoo Darayo Liiska Xiddigaha Wajahaya Wolves - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Unai Emery Oo Go’aan Ka Gaaray Hadii Granit Xhaka Uu Kusoo Darayo...
Unai Emery Oo Go’aan Ka Gaaray Hadii Granit Xhaka Uu Kusoo Darayo Liiska Xiddigaha Wajahaya Wolves
Tababare Unai Emery ayaa go’aan ay ku farxeen jamaahiirta Arsenal ka gaaray xaalada Granit Xhaka, xiddiga reer Switzerland kuma jiro liiska ciyaartoyda Gunners ee wajahaya Wolverhampton Wonderers berito oo sabti ah.
Kabtanka Arsenal ayey isku dhaceen jamaahiirta kadib markii badal lagu sameeyay kulankii ay 2-2 la dhaafi waayeen Crystal Palace, aflagaado ayuu ugu jawaabay taageerayaasha markii ay ku oriyeen wuxuuna garoonka ka baxay isagoo careysan.
Granit Xhaka ayaa aaday gurigiisa inta aysan ciyaarta dhamaan, sidoo kalana wuxuu raaligelin siiyay taageerayaasha, inkastoo uu kashifay inuu helay fariimo hanjabaad ah.
Unai Emery wuxuu ka dhawaajiyay iney tahay in diirada la saaro kulanka Wolves, xiddigana uusan ka mid aheyn liiska ciyaartoyda kooxda ee kasoo muuqan kara ciyaarta sabtida dhici doonta.
“Wuxuu sheegay inuu careysan yahay, jamaahiirta wuu raaligeliyay iyo qof walba oo kale, hadda waa inaan diirada saarno kulanka berito” ayuu yiri Unai Emery.
Previous articleSAWIRO:-Ciidamada Dowladda oo la wareegay deegaan u dhow Dhuusamareeb
Next articleSAWIRO: Maamulka Idaacadda Risaala oo daahfuray Barnaamij loogu gurmanaayo Shacabka Beledweyne